Kooxda Man City Iyo Pep Gurdiola Oo Guul-darro Xanuun Baddan Baday Man United & Jose Mourinho Oo Old Trafford Ku Sugan + Sawirro
HomeWararka MaantaKooxda Man City Iyo Pep Gurdiola Oo Guul-darro Xanuun Baddan Baday Man United & Jose Mourinho Oo Old Trafford Ku Sugan + Sawirro
Kooxda Manchester City iyo macalinkeeda Pep Guardiola ayaa guul xanuun baddan gaadhsiiyey kooxda ay ficiltamaan ee Manchester United iyo macalinkeeda Jose Mourinho, iyadoo kulankani uu ka dhacay gegida riyada ee Old Trafford Stadium.
Kooxda Manchester United ayaa guul-darreysatay kulankii ugu horeeyay horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan iyadoo ay u tahay wax xanuun baddan macalinka reer Portugal inuu guul-darro kala kulmo nin ay aad u xifaaltamaan ee Pep Guardiola ,halka United ay guul-darro wadno qabad ah kala kulantay kooxda ay jaarka cadawga yihiin ee Citizens.
2-gool oo ay City u dhalliyeen qeybta hore ciyaarta Kevin De Bruyne iyo Kelechi Iheanacho ayaa guul u horseeday kooxda ka dhisan Etihad Stadium, halka goolka qudha oo ay gurigooda ku dhalliyeen United uu dhaliyay Ibrahimovic dhammaadkii qeybta hore ee ciyaarta.
Kooxda Manchester City ayaa si dar-dar awoodeed iyo kubad heysasho ah ku bilowday ciyaarta iyadoo marti ah wiilasha Pep Guardiola ayaana u muuqday kuwa ku raaxeysanaya kubaddaha.
Paul Pogba ayaa tijaabiyay goolka Manchester City markii uu kubad ka helay Henrikh Mkhitaryan, wiilka boqolka malyan laga soo bixiyay ayaana kubadii uu goolka aadiyay uu sare uga kacay iyadoo Claudio Bravo uusan wajahin wax dhibaato ah daqiiqadii 8-aad.
GOOOOL!!! Kevin De Bruyne ayaa shabaqa soo taabtay markii uu kubad ku hor qaatay Daley Blind oo dayacaad muujiyay kadib markii uu K. Iheanacho kubad fiican oo madax ah u gudbiyay xiddiga xiddiga reer Belgium ayaana si qurux badan goolhaye David De Gea kubad u daba mariyay.
Laad xor ah ayaa City loo dhigay meel 30 mitir u jirta goolka ka dib markii Lingard uu kubada gacanta ku taabtay, waxaa kubada soo qaaday De Bruyne laakiin Daafaca Manchester United ayaa iska bixiyay.
Henrikh Mkhitaryan ayaa weerar u qaaday Man United balse kubadii uu goolka aadiyay daafaca ayaa saaray, Rooney ayaa isna mar kale qeyb ka noqday muran kale markii ay isku dhaceen Fernandinho laakiin wax calaamad ah lama siinin.
Bacary Sagna ayaa isku dayay inuu gool u dhaliyo kooxdiisa Manchester City markii uu kubad gantaal ah goosha aadiyay, balse kubadiisa goolka kuma aadin inkastoo ay u dhawaatay.
Wayne Rooney iyo tababare Pep Guardiola ayaa is qabsaday markii macalinka reer Spain uu ku dhagay kubad ay lahaayeen xidigaha Manchester United iyadoo Wayne uu kubadda doontay, Rooney ayaa awood ku muquuniyay Pep walow markii dambe ay salaan ku kala tageen.
GOOL!!! Daqiiqadii 36-aad Manchester City ayaa heshay goolkii labaad markii Kelechi Iheanacho uu shabaqa soo taabtay wiilka da’da yar ayaana si fudud shabaqa ugu shubay kubad uu markii hore birta ku dhuftay De Bruyne, ciyaartoyda United ayaa ku andacooday inuu Offside yahay, balse marnaba uma muuqan madama uu weeraryahankaan ka horeeyay Daley Bliind.
XAQIIQ: Kelechi Iheanacho ayaa dhaliyay sagaal gool kaliya 13 darbo oo uu goosha la aadiyay kulamada horyaalka Ingiriiska, waana wa xuu dheer yahay ciyaariyahan walba.
GOOL!!! Daqiiqadii 42-aad Manchester United ayaa gool soo celisay markii Zlatan Ibrahimovic uu si fiican u dhameystiray kubad uu qalday goolhaye Claudio Bravo, Ibrahimovic ayaana dhaliyay goolkiisii 4-aad ee Man United afartii kulan ee uu ciyaaray.
Qeybta hore ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 1-2 oo ay hogaanka ku heyso kooxda Pep Guardiola ayaana aheyd kooxda mar walba awoodda laheyd qeybta hore ciyaarta.
Qeybta labaad markii lasoo laabtay Jose Mourinho ayaa laba badal sameeyay iyadoo qolka labiska lagu soo cunay Jesse Lingard iyo Mkhitaryan waxaana lasoo galiyay Marcus Rashford Iyo Ander Herrera.
Rashford ayaa durbaba saameyn yeeshay waxa uu meel cidlo ah uga soo tagay Sagna, kadib markii uu kasoo xarooday garabka bidix, laakiin kubadii uu soo dhigay waxaa luga la helay Zlatan Ibrahimovic kaasoo dusha sarre ee goolka mariyay daqiiqadii 46-aad.
Zlatan Ibrahimovic ayaa mar kale sameeyay isku day xoogan markii uu sadex daqiiqo gudahood uu laba isku day sameeyay balse kubadiisii labaad koontorool fiican kadib dusha sare mariyay mar kale.
Goolhaye Claudio Bravo ayaa sameeyay qalad weyn markii uu kubad si qaldan ugu baasay Rooney, goolhayaha reer Chile ayaase qalad ku galay Rooney isagoo doonaya inuu ka badbaadsado kubadda wuuse ku guuleystay iney aheyd mid kamid ah halisyadii ugu xumaa ee ciyaarta daqiiqadii 58-aad.
Goolhaye David De Gea ayaa badbaadiyay kubad halis aheyd oo ka timid Fernando iyadoo City ay u dhawaatay iney hesho goolkii sadexaad ee ciyaarta, Otamendi ayaa damcay inuu isku dayo dhameystirkeeda balse Eric Bailly ayaa kula dagaalamay.
Manchester City ayaa cadaadis saartay dhigeeda United iyadoo daqiiqad gudaheed ay heleen laba koorno, Kevin De Bruyn ayaana dhibay daafaca Red Devils.
HALIS!! Kevin De Bruyne ayaa nasiib darro ay haleeshay markii uu birta salkeeda ku dhuftay kubad mucjiso aheyd oo uu ka helay Leroy Sane, United ayaana ka fakatay in goolasha loo badiyo daqiiqadii 75-aad ee ciyaarta.
Zlatan Ibrahimovic ayaa u dhawaaday inuu daqiiqadihii ugu dambeeyay barbaro u keeno Manchester United, balse daafaca Citizens ayaa isku dhigay.
Natiijada ciyaarta ayaa ugu dambeyn noqotay mid kusoo dhamaatay 1-2 oo ay guul ku gaartay Manchester City, Citizens ayaa haatan si kumeel gaar ah u hogaamineysa horyaalka iyadoo leh 12-dhibcood, waxaana laga sugi donaa hadii Blues ay kala wareegto hogaanka kooxdaan iyadoo kaashaneysa dhanka goolasha.